Paul Childs's Articles on Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Paul Childs
Paul Childs dia veterana momba ny teknolojia dokambarotra manana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny fananganana sy fampitomboana ny orinasan-doka finday manerantany amin'ny sehatry ny programa manerana ny lafiny fangatahana sy famatsiana. Izy dia nitana toerana ambony ambony tao amin'ny ambaratonga VP sy C momba ny fampandrosoana ny orinasa, ny asa, ny varotra ary ny varotra. Niara-nanorina ny Adfonic i Paul tamin'ny taona 2008, izay lasa iray amin'ireo DSP finday malaza manerantany. Vao haingana, i Paul no Lehiben'ny Revenue Office tao amin'ny Smadex, izay nanampiany ny fitomboana sy ny fivoahana ny orinasa ho any Entravision. Paul dia VP Business Development amin'izao fotoana izao MOLOCO.
Miverina amin'ny Sizzle: Ahoana no ahafahan'ny mpivarotra e-varotra mampiasa famoronana mba hampitomboana ny fiverenana
Alakamisy 3 martsa 2022 Alakamisy 3 martsa 2022 Paul Childs
Ny fanavaozana ny tsiambaratelon'ny Apple dia nanova tanteraka ny fomba anaovan'ny mpivarotra e-varotra ny asany. Tao anatin'ny volana maromaro taorian'ny namoahana ny fanavaozana dia ampahany kely amin'ny mpampiasa iOS no nisafidy ny hanaraka ny doka. Araka ny fanavaozam-baovao farany tamin'ny volana jona, manodidina ny 26% amin'ireo mpampiasa fampiharana manerantany no namela fampiharana hanara-maso azy ireo amin'ny fitaovana Apple. Ity tarehimarika ity dia ambany kokoa any Etazonia amin'ny 16% fotsiny. BusinessOfApps Raha tsy misy fanekena mazava hanara-maso ny asan'ny mpampiasa manerana ny habaka nomerika, maro